Shirka Madasha iskaashiga Soomaaliya oo ka furmay Muqdisho - Jigjiga Online
HomeSomalidaShirka Madasha iskaashiga Soomaaliya oo ka furmay Muqdisho
Muqdisho (JigjigaOnline) – Waxaa maanta Magaalada Muqdisho ka furmaya Shirka iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya, kaasi oo ay ka qayb galayaan in ka badan wakiillada 50 waddan ee daneeya arrimaha Soomaaliya, madaxda maamul goboleedyada qaar iyo wakiillo bulshada rayadka ka socda.
Shirkan oo socon doonaa laba maalmood ah ayaa waxaa lagu diiradda lagu saari doonaa waxyaabihii ka hirgalay qodobadii la isku afgartay shirkii kan ka horeeyay oo lagu qabtay magaalada Brussels ee dalka Belgium.
Waxyaabaha sida gaarka ah ishu loogu hayo ayaa waxaa kamid ah arrimaha amniga, dhaqaalaha, siyaasadda iyo bulshada.
Sanad kadib shirkaas waxaa muuqata in khilaaf baahsan uu u dhaxeeyo dowladda federaalka iyo qaar kaid ah maamul goboleedyada dalka, waxaana aan la ogeyn ka qeybgalka qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada oo ay kamid tahay Jubaland.
Shirkii hore waxyaabihii ka qabsoomay iyo midkan waxa laga filayo ayaa BBC-da waxay wax ka weydiisay Abuukaate Zakariye oo katirsan hay’adda xasaradaha calamka ee ICJ.
“Shirkii sanadkii hore wuxuu ka dhacay dalka dibadiisa, madaxda mamaul goboleedyda iyo dowladda federaalka ayaa la isugu geeyay Brussels, waxaan laga wada hadlay heshiiskii Baydhabo in lasii dardargeliyo oo ay ugu muhiimsaneyd qorshaha amniga qaranka, taas oo loogu talo galay in la hagaajiyo ciidamo qaran oo isku daf ah oo mateli kara qaranka; ciidamadaas oo 18 kun loona qorsheeyay in maamul goboleed walba ay ka yimaadaan saddex kun oo askari”, ayuu yiri Abuukate Zakariye.
Wuxu intaa raaciyay in aysan waxba ka hirgelin dhamaan waxyaabihii lagu heshiiyay shirkii Brussels.
Hasayeeshee fikir kaas ka duwan waxaa qaba Dr; Siciid Sheekh Abuukar oo sheegay in isfahamka maamul goboleedyda qaar iyo dowladda ay horseeday waxyaabo badan oo keentay in shirka lagu qabto dalka gudihiisa.
“Anigu waxaan isleeyahay waxyaabo badan ayaa ka qabsoomay, oo guulo badan ayaa laga gaaray oo ay kamid tahay in shirarkii dalka dibadiisa lagu qaban jiray maanta lagu qabanaya gudaha dalka, waxyaab ka dhiman way jiri karaan”, ayuu yiri Dr Siciid Sheekh.
Shirkan oo maanta ay tahay maalintiis koowaad ayaa ilaa iyo hadda la xqiijiyay inay ka qeybgalayaan ra’iisul wasaare ku xigeenka, wasiiro ka socda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, waxaase aan la ogeyn inay ka soo qeybgeli doonaan madaxweynayaasha maamuulada Jubaland iyo Puntland oo uu khilaaf kala dhaxeeyo dowladda federaalka.